ကျွန်တော်ချစ်သောသူငယ်ချင်းများ: သုခလေးပါး for all my lovely friends
ဘလော့ခ်ရေးခဲ့တာ တစ်ရာ ပြည့်မြောက်တဲ့ လက်ဆောင် အနေနဲ့ ...
ရပ်နီးရပ်ဝေးက မြင်ဖူး၊ မမြင်ဖူးတဲ့ ... သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်
၁၃၆၉ သီတင်းကျွတ်လကွယ်နေ့ - သောကြာနေ့ က
နာကြားဖြစ်တဲ့ တရားတော် တစ်ပုဒ်ကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ...
“သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာ အရှင်ဥာဏိဿရ” ဟောကြားတော်မူတဲ့
“သုခလေးပါး” တရားတော်ပါ...အကြောင်းအရာ အချို့ကို ထုတ်နှုတ် ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ...
တန်ဘိုးရှိတဲ့ အချိန်ကို တန်ဘိုးရှိရှိ အသုံးချကြရအောင် လို့ဆိုရင်..
ဓမ္မနဲ့ အချိန်ကို သုံးတာဟာ - အဲဒီ အချိန်ဟာ တန်ဘိုး အရှိဆုံးပဲ...
လောကမှာ - ဗုဒ္ဓရှင်တော်တို့ ပွင့်တော်မူကြခြင်းသည် လောကကြီးအတွက် ချမ်းသာတစ်ပါးပဲ၊
ဘုရား အဆူဆူတို့ ပွင့်တော်မူကြခြင်း... ဒါ လောကရဲ့ ချမ်းသာ တစ်ခုပဲ
Happiness is the Arising of The Buddha
ဘုရားတစ်ဆူဆူပွင့်လာလို့ အနည်းဆုံးရလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက...
ချမ်းသာသုခကတော့ လူ့ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်စုံသွားခြင်းပဲ...
မကောင်းမှုနဲ့ ကောင်းမှုကို သိမှ လူသား လို့ခေါ်တယ်... ဒါအနိမ့်ဆုံး လူ့အဓိပ္ပါယ်ပဲ
လူဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပါဠိစာပေမှာ မနုဿ လို့ခေါ်တယ် မန+ဥဿ = မနုဿ
မန = အသိ ဥဿ = သတ္တ၀ါ
အနည်းဆုံး မကောင်းမှုနဲ့ ကောင်းမှုကို ခွဲသိလို့ လူလို့ခေါ်တယ်...
အဲဒီလောက်မှ မသိဘူးဆိုရင် လူလို့ မခေါ်နိုင်ဘူး၊ လူဆိုတဲ့ စာရင်းမ၀င်ဘူး...
မကောင်းမှုနဲ့ ကောင်းမှုဟာ ဘာလဲ လို့မေးတဲ့ အမေရိကားက ပါမောက္ခ...
တကယ်ကို မသိတဲ့ အတွက်မေးခြင်း ဖြစ်တယ်...
မကောင်းတာ မလုပ်နဲ့လို့ ဂျီးဆပ်စ်ခရိုက်လည်းပြောပါတယ်.. စိန့် အမျိုးမျိုးတို့လည်း ပြောပါတယ်...
ဒါပေမယ့် မကောင်းမှု၊ ကောင်းမှု ဒီနှစ်ခုကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပြီး ဘယ်သူမှ ပြောမသွားဘူး...
မကောင်းမှုဆိုတာ ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးပဲ.. ကောင်းမှုဆိုတာ ပုညကိရိယာ ၀တ္ထုဆယ်ပါးပဲ...
သူတို့ ကျမ်းစာတွေမှာ အဲဒီ စာရင်း မရှိဘူး.. မကောင်းမှု ဘာကြောင့် ဖြစ်သလဲ မေးရင် ပိုတောင်ခက်သေးတယ်...
လောဘ ဒေါသ မောဟ ဆိုတဲ့.. အကုသိုလ်ဟိတ် သုံးပါးကြောင့် ဒုစရိုက် ဆယ်ပါး ဖြစ်ရတယ်...
အလောဘ အဒေါသ အမောဟ ဆိုတဲ့.. ကုသိုလ်ဟိတ် သုံးပါးကြောင့် ပုညကိရိယာ ၀တ္ထုဆယ်ပါး ဖြစ်ရတယ်...
ဘုန်းကြီးတို့မှာ အလွန်စနစ်ကျတဲ့ အဘိဓမ္မာကို မြတ်ဗုဒ္ဓက ဟောထားတာ...
ဘုရားသာ မပွင့်ရင် အဲဒါတွေကို ဘယ်သူ့မှ သိမှာ မဟုတ်ဘူး... မသိနိုင်ဘူး...
အဲဒီအသိမျိုးမရှိရင် လောကမှာ အဆင်းရဲဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ..
Mentally Poor စိတ်ဓါတ်ရေးရာအားဖြင့် အဆင်းရဲဆုံးပဲ...
Physically ဘယ်လောက်ပဲ Rich ဖြစ်နေစေကာမူ
Physically Advanced ဘယ်လောက်ပဲ ဖြစ်နေစေကာမူ
Mentally Poor စိတ်ဓါတ်ရေးရာ အရ ဆင်းရဲရင် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ လောကမှာ အဆင်းရဲဆုံးပဲ...
လောဘ ဒေါသ မောဟတွေကနေ တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ အတွက် ဒုစရိုက် ဆယ်ပါး ပေါ်ထွက်လာတယ်...
အလောဘ ဆိုတာ မလိုချင်တာတင်မဟုတ်ဘူး... မလိုချင်ရုံနဲ့ ဒါန ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ဘူး...
မလိုချင်ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်ထဲမှာ.. ပေးချင်ပြီဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး ဖြစ်လာမှ ဒါန... အဲဒါ တကယ့် အလောဘ...
မကောင်းမှုကို သိရမယ်.. ကောင်းမှုကို သိရမယ်.. အဲဒါမှ... "မနုဿ" လူစာရင်းသွင်းတယ်...
အဲဒါမျိုးတွေကို ဘယ်သူပြောသွားလဲ.. ဗုဒ္ဓမှတပါး ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ကမ္ဘာမှာ မရှိဘူး...
ဘာသာရေး သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ မည်သည့်ဘာသာရေး သမိုင်းကိုပဲ ကြည့်ကြည့်..
ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကလွဲရင် လူ့ဘ၀ကို ဒီလို မြှင့်ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာ
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ ဗုဒ္ဓကလွဲရင် ဘယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှ မပြောခဲ့ကြဘူး..
အဲဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဟာ လူသားတို့ရဲ့ တကယ့်ကျေးဇူးရှင်ပဲ...
အဲဒီတော့ ဒီလို အသိမျိုးပေးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓရှင်တော် ပေါ်လာတာ မချမ်းသာဘူးလား..
အသိသာ မရှိခဲ့ရင် နေနဲ့လ နှစ်ခုကွယ်နေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ လူတွေလမ်းလျှောက်သလို ဖြစ်မယ်...
မျက်လုံးမရှိတဲ့ ကမ္ဘာမှာ မျက်လုံးပေးခဲ့တာ.. အသိမရှိတဲ့ ကမ္ဘာမှာ အသိပေးခဲ့တာ...
မျက်လုံးမရှိတဲ့ ကမ္ဘာမှာ မျက်လုံးပေးခဲ့တဲ့ ဘုရား.. အသိမရှိတဲ့ ကမ္ဘာမှာ အသိဥာဏ်ပေးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓပေါ်လာတာ...
ကမ္ဘာကြီးအတွက် အမွန်မြတ်ဆုံးသော ချမ်းသာတစ်မျိုးပဲ...
အဲဒီအသိမရှိရင် ကမ္ဘာဟာ သိပ်ဆင်းရဲပြီ...
ဒါထက် လေးနက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ ရှိသေးတယ်...
ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ သောကတွေ ပြည့်ရုံမက လျှံနေတယ်.. ဒုက္ခတွေလည်း ပြည့်ရုံမက လျှံနေတယ်...
အဲဒီဒုက္ခပင်လယ်ကြီးကို.. သောကပင်လယ်ကြီးကို.. (How to Overcome) ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ...
အဲဒီနည်းတွေကို ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကလွဲရင် ဘယ်သူပြောဘူးသလဲ...
ကမ္ဘာမှာ ကိုးကွယ်စရာ ဘာသာတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ အထဲက..
ဘာသာရေးသမိုင်းမှာ အဲဒီသောက ပရိဒေ၀ ဒုက္ခ ဒေါမနဿ ပင်လယ်ကြီးကို
ကျော်ဖြတ်တဲ့နည်းတွေကို ပြောတော်မူသွားတာ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ် တစ်ဆူတည်းပဲ ရှိတယ်..
အဲဒါကြောင့် သောကဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ သောကတွေကို ကျော်လွှားတဲ့နည်း...
ဒုက္ခတွေလည်း ပြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဒုက္ခပင်လယ်ကို ကူးခတ်တဲ့နည်း..
အဲဒါတွေကို ကျော်လွှားနည်းတွေကို ပြောပြတဲ့ ဗုဒ္ဓရှင်တော်တို့ ပွင့်ပေါ်လာတာဟာ..
ဒီကမ္ဘာသားတွေအတွက် အမြတ်ဆုံးသော ပထမ ချမ်းသာပဲ...
ကာမသုခ၊ ရာဇသုခ၊ ဒေ၀ရာဇ သုခ၊ မနုဿရာဇ သုခ၊ ဗြဟ္မသုခ
အဲဒါတွေဟာ အလွန်နိမ့်ကျပါတယ်.. ချမ်းသာ စင်စစ်တွေ မဟုတ်ကြဘူး...
နံပါတ်တစ် ချမ်းသာက ဗုဒ္ဓရှင်တော် ပွင့်ပေါ်ခြင်းသည်.. လောကကြီးအတွက် အမြတ်ဆုံးသော ချမ်းသာပဲ...
လောကသုံးပါမှာ ဗုဒ္ဓရှင်တော်တို့ ပွင့်ထွန်း ပေါ်ပေါက်လာတာဟာ.. ဒီကမ္ဘာသားတွေအတွက် အမြတ်ဆုံးသော ပထမ ချမ်းသာပဲ...
အနည်းဆုံး မကောင်းမှု ကောင်းမှု
ဒီနှစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိခွင့်ရလိုက်တဲ့ အခါမှာ လူရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ ပြည့်ဝသွားပြီ..
မကောင်းမှု ကောင်းမှု နှစ်ခုလောက်မှ သိခွင့်မရလို့ရှိရင် ဒီလူတွေက...
စားဖို့ သောက်ဖို့ မေထုန်မှီဝဲဖို့ ဒီသုံးခုလောက်နဲ့ပဲ အသိဟာ ဆုံးနေကြတယ်...
ဒီသုံးခုလောက်ပဲ သိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ အဲဒါဟာ တိရိစ္ဆာန်ပဲ...
တိရိစ္ဆာန်ဆိုတာ ဒီသုံးမျိုးပဲ နားလည်တာ...
အဲဒီတော့ လူ့ဘ၀ကို အဆင့်မြှင့်ပေးတဲ့ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ပေါ်လာတဟာ ကမ္ဘာကြီးအတွက် နံပါတ်တစ် ချမ်းသာပဲ...
The Arising of The Buddha is the Happiness of The World.
သူတော်ကောင်းတရားကို ဟောကြား၍ နေကြခြင်းသည် ဒုတိယ ချမ်းသာ...
မြတ်ဗုဒ္ဓက ကိလေသာ တိမ်သလ္လာတွေဖုံးနေတဲ့ လူသားတွေရဲ့ ဥာဏ်မျက်စိကို ဓမ္မဆိုတဲ့ မျက်စဉ်းခတ်ပေးတယ်..
အရှင်ဘုရားရဲ့ ဓမ္မကို မကြားရသေးလို့သာ လူတွေ ဒုက္ခရောက်နေကြတာ လို့လျှောက်တဲ့ အရှိခိုးခံ ဗြဟ္မာကြီး...
အဲဒီအချိန်က ခရစ်ယာန်ဘာသာ မပေါ်သေးဘူး နှစ် ၆၀၀ လောက် နောက်ကျပြီးမှ ပေါ်တယ်
အစ္စလာမ်ဘာသာ မပေါ်သေးဘူး ၁၁၇၀ လောက် နောက်ကျပြီးမှ ပေါ်တယ်
မြတ်ဗုဒ္ဓ တရားဟောခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရလာတဲ့ အကျိုးတွေက ဆုံးဖြတ်လို့မှ မရဘဲ
ချိုသာတဲ့ တရားသံလေးတွေကို နားစိုက်ထောင်နေတဲ့ ဖားကလေး... နတ်ပြည်မှာကြီးကျယ်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ခံစားရတယ်..
ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်တို့သည် သတ္တလောကရဲ့ အကျိူးစီးပွားကို သယ်ပိုးဖို့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်...
အဲဒီလို ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ ထံမှာ ပူဇော်ကြ လှူဒါန်းကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ ကြီးကျယ်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဖြစ်တယ်...
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကို တကယ့် အသိစိတ်နဲ့ ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီးသာ နာလိုက်ရမယ်ဆိုရင်..
သစ္စာဆိုတဲ့ အမှန်တရားသိပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်အထိ သွားတယ်...
ပြန်လည်ဟောကြား၊ နာကြား၍ နေကြခြင်းသည်.. ချမ်းသာခြင်း စင်စစ် တကယ်ဖြစ်တယ်..
Happiness isaTeaching of Supplying Dhamma.
သံဃာတော်များ၏ ကိုယ်၊စိတ် ညီညွတ်ခြင်း၊ တစိတ်တည်း ရှိကြခြင်းသည် ချမ်းသာသုခကို ဖြစ်စေသည်..
(အသေးစိတ်ကို ဆရာတော်၏ ဟောကြားချက်တွင် ဆက်လက်နာကြားနိုင်ပါ၏...)
အငယ်ဆုံး သိက္ခာပုဒ်လေးတွေကို သံဃာက သဘောတူရင် ပယ်လို့ရတယ်လို့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွှန်ချက် ရှိပေမယ့်
တရားတော်တွေကို ပထမ အကြိမ် သံဃာ့အစည်းအဝေး ကတည်းက
မူလ အတိုင်း ညီညီညွတ်ညွတ် မူရင်းအတိုင်း ထားရှိခဲ့တာကြောင့် အခုထိ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း မူရင်းအတိုင်း ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်
ပထမအကြိမ် သံဃာ့ အစည်းအဝေး မြတ်ဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး သုံးလ အကြာ... ရာဇဂြိုလ် ဝေဘာရ တောင်ခြေမှာ ကျင်းပတယ်...
ဒုတိယအကြိမ် သံဃာ့ အစည်းအဝေး နှစ် ၁၀၀ အကြာ ဝေသာလီမှာ ကျင်းပတယ်...
တတိယအကြိမ် သံဃာ့ အစည်းအဝေးကို ၂၃၆ နှစ် အကြာ ပတ္တနားမှာ ကျင်းပတယ်...
စတုတ္ထအကြိမ် သံဃာ့ အစည်းအဝေး နှစ် ၄၅၀ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ပါတလိ...
ပဉ္စမအကြိမ် သံဃာ့ အစည်းအဝေး သာသနာနှစ် ၂၄၀၀ ကျော်မှာ မန္တလေးမှာ ကျင်းပတယ်...
ဆဌမအကြိမ် သံဃာ့ အစည်းအဝေး သာသနာနှစ် ၂၅၀၀ ပြည့်မှာ ကမ္ဘာအေးမှာ ကျင်းပတယ်...
ခြောက်ကြိမ်လုံးမှာ ဒေသနာတော်တွေကို မူရင်းအတိုင်း သန့်သန့်ရှင်းရှုင်း ထိန်းထားတယ်...
လူ၊ ရှင်ရဟန်းတို့၏ ညီညွတ်ခြင်း...
ရဟန်းတရားကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်း... ပရိယတ္တိ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်တွေကို သင်ကြားပို့ချခြင်းဆိုတဲ့ လုပ်ငန်း... ပရိပတ္တိ
သာသနာထမ်း ရဟန်းတော်များအတွက်ဆိုရင် တိုက်ရိုက်က ဒီလုပ်ငန်းနှစ်ရပ်ပဲ...
ညီညွတ်တော်မူကြတဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ အလုပ်တွေဟာ
သာသနာနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် တကယ် ချမ်းသာတယ်..
လူတို့၏ ညီညွတ်ခြင်းသည်လည်း တိုင်းပြည်အတွက် ချမ်းသာတယ်...
လူ ရှင် ရဟန်း အစုအပေါင်း၏ ကိုယ်စိတ် ညီညွတ်ခြင်း
ညီညွတ်သော သံဃာတော်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းများသည် သာသနာတော်အတွက် တကယ်ချမ်းသာသည်...
ညီညွတ်သော လူသားတွေရဲ့ လုပ်ငန်းများသည် တိုင်းသူ ပြည်သား အားလုံးအတွက် တကယ်ချမ်းသာသည်...
ဟု ရှင်တော် မြတ်ဗုဒ္ဓ က ကရုဏာရှေ့ထား၊ မေတ္တာအားဖြင့် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါကြောင်း...
ဆရာတော် ဟောကြားထားတာက အများကြီးပြည့်စုံပါတယ်..
ဖော်ပြထားတာတွေမှာ တစ်ခုခု အမှားအယွင်းများပါရှိခဲ့ရင်
-"သုခလေးပါး" တရားတော် - ရယူနာကြားနိုင်ရန်
အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာတော် အကျိုးကို